Qaybta 1: Waa maxay dadku ugu wareejiyo ka Samsung Galaxy si iPad
Doondoon, oo u sheeg waxa ay dadka ugu wareejiyo (sida sawiro, xiriirada, fariimaha, iwm) ka Samsung Galaxy si ay iPad iyo sheeg sababta. Haddii aad iibsaday brand cusub iPad, malaha aad rabtid in aad oo dhan kuu soo gudbin content ka qalab Samsung Galaxy. Waxaad ku wareejin kartaa xiriirada, fariimaha, sawiro, jadwalka, taariikhda call iyo waxyaabo kale oo badan. Waxaa jira habab badan oo ay u gudbiyaan xogta aad sida iCloud, Lugood, softwares badan cid saddexaad iyo qalabka sida Wondershare MobileTrans
Qaybta 2. Easy xal: 1 click in ay xogta ka Samsung Galaxy wareejiyo iPad
Waxaad isticmaali kartaa Wondershare MobileTrans in ay xogta ka Samsung Galaxy wareejiyo si aad iPad. Items in aad ku wareejin karaa waa photos, music, video iyo waxyaabo kale oo badan. Qalabkani waxa loo isticmaali karaa Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy Note 4, Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy S2, Note 3, Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galaxy Note Samsung Galaxy. Xitaa haddii aad leedahay mini Apple iPad 2 ama hawada Apple iPad, waxaad isticmaali kartaa Wondershare qalabka. Si kastaba ha ahaatee, iPads taageeray waa inay haystaan ​​macruufka 5, macruufka 6, macruufka 7, macruufka 8 ama 9 macruufka nidaamka hawlgalka. Waxaa si fiican u la shaqeysaa iPad hawada, iPad mini la isha bandhigay, iPad la isha bandhigay, iPad mini, iPad 2, iPad New iyo iPad. Content ayaa loo gudbin doonaa fudud oo degdeg badan ka Samsung Galaxy si iPad, iyadoo keliya hal click. Sidoo kale waxaad tahay si loogu badalo wax music video iyo in Samsung iyo iPad qaabab filaayo in daawashada awoodaan. Habka oo dhan waa 100% ammaan ah.
Iyadoo Wondershare MobileTrans aad wareejin karaan xiriirada in xisaabaadka, sida Google iyo Twitter. Oo sidaas waa inaad u saxiixi karaa xisaabaadka si ay u isticmaalaan qalab this. Sidoo kale, waxaad u baahan tahay PC ah, aad Samsung Galaxy qalab, aad iPad, fiilooyinka USB labada qalabka si uu ugu caddeeyo xidhiidhka la jirka kombiyuutarka, iyo dabcan Wondershare MobileTrans qalabka. Sida aad ogtahay, macruufka nidaamyada hawlgalka iyo nidaamyada hawlgalka Android kala duwan yihiin iyo xogta aan la wadaagi karo oo ka mid ba midka kale of this laba qalab kala duwan. Tani waa sababta, waxaad isticmaali kartaa Wondershare MobileTrans in xogta ka ah aad Samsung Galaxy wareejiyo si aad iPad.
Raac tallaabooyinkan si kala iibsiga Axdiga Hore oo aan arin kasta oo aad raalli ka Smasung Galaxy si iPad:
Tallaabada 1. Open Wondershare MobileTrans software
Waa wakhti ay ku soo baxdo iyo rakibi Wondershare MobileTrans ku on your computer. Ka dib markii la rakibey lagu sameeyo, furo software ka dooro Phone in Transfer Phone si ay u gudbiyaan xogta ay ka Samsung Galaxy si iPad. Waxaad arki doontaa wax hababka oo dhan sida Phone in Transfer Phone, Soo Celinta ka hayaan, Back Up Your Phone, masixi Your Old Phone. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa in guji hab hore.
Tallaabada 2. Samee xiriir jirka u dhexeeya aad Samsung Galaxy iyo iPad
Qaado fiilooyinka USB gaarsiisay aad Samsung iyo iPad, oo waxay u xirmaan your computer. Haddii qalabka waxaa si fiican u xiran, waxaad arki doontaa hoos ku qalab kasta sumaddii jeeg cagaaran Connected. Qalab aad isha waa Samsung Galaxy iyo caga waa iPad.
Tallaabada 3. Transfer aad raalli ka Samsung Galaxy si iPad
Content oo dhan ka Samsung Galaxy waxaa laga daawan karaa dhexe ee suuqa oo aad alaabta oo dhan sida Xiriirada, fariimaha qoraalka, Calendar, Apps, Photos, Videos, Music, si aad iPad wareejin karaan. Tallaabada xigta waa in guji Start Copy iyo content waxaa loo wareejin doonaa iPad. Mid ka mid ah wax wanaagsan ay tahay in Wondershare MobileTrans ogaadaa ah music video iyo in aan lagu ciyaari karo iPad iyo iyaga badali si iPad qaab filaayo in sida mp3, mp4 oo aad ku raaxaysan karaan warbaahinta on your iPad.
Waa arrin aad u muhiim ah in aan barkinta qalabka inta howshu socoto oo dhan. Haddii ay taasi qalad ah dhacaya, waxaad u baahan tahay in ay mar kale bilaabaan ka badan. Waa in aad sugto muddo ilaa content oo dhan waxaa loo wareejin doonaa. Kadib markii geedi socodka la dhammeeyo, waxaad yeelan doontaa oo dhan sawiro cajiib ah, videos, iyo dhammaan waxyaabaha loo doortay in loo soo wareejiyo, on your iPad.
Qaybta 3. Poll: Waa kuwee model ah Samsung Galaxy ayaad isticmaashaa?
Waxaa jira noocyo badan Samsung Galaxy la muuqaalada kala duwan, oo ay ku jiraan ka weyn ama ka yar awoodda xasuusta gudaha, tirada kala duwan soo bandhigay, kaamirooyinka megapixels kala duwan. Halkan waxaa ku qoran toban lagu daydo oo caan ah,
Samsung Galaxy qod6, la xasuusta gudaha ilaa 128GB
Samsung Galaxy S5, oo leh 16 camera MP
Samsung Galaxy S5 Mini, iyadoo HD 4.5 inches bandhigay Full
Note Samsung Galaxy 3
> Resource > iPad > Sida loo kala iibsiga xogta ka Samsung Galaxy si iPad